🥇 ▷ Minecraft wuxuu ka dhammaanayaa 4K, HDR ama iftiin wanaagsan, ma jirin qalab lagu dhaqaajiyo ✅
Minecraft wuxuu ka dhammaanayaa 4K, HDR ama iftiin wanaagsan, ma jirin qalab lagu dhaqaajiyo
Midki 2017, inta lagu gudajiro E3, Microsoft iibiyey waxa hadda cadeeyay inuu qiiq badan hareeraha yahay Minecraft. Waxay ahayd shirkii ay shirkaddu ku dhawaaqday soo-saarista mustaqbalka ee waxa loogu yeero “Graphics Super Duper Super“, Xirmooyin horumarin sawirro ah taasoo cadeysay inay tahay mid aad loogu baahan yahay oo keliya maahan qalabka loo yaqaan ‘Vitaminbox’ Xbox One X, laakiin xitaa kumbuyuutarrada kumbuyuutarrada ayaa ku dhammaan doona xirmada sawir-gacmeedka, in kasta oo ugu yaraan uusan qofna illaawi doonin mahadsanid tirada badan ee mods diyaar u ah hagaajinta muuqaalka aragga.
Iyada oo “Graphics Super Duper Super“, Mojang iyo Microsoft waxay ballanqaadeen inay keeni doonaan xalka moodada 4K to Minecraft, the HDR, Y nalka cusub ee iftiinka iyo hooska, laakiin waqtiga runta ah kuwan oo dhan lagu daro ka hor istaagay in ciyaarta si habsami leh u socoto si ay u gaaraan mid ka mid ah consoles ah.
Haddii aan kahadalno nooca PC-gaaga, Ujeeddadaada ayaa kaliya lagu xiriirin doonaa PC-yada ugu sarreeya, markaa shirkaddu waxay go’aansan lahayd inay “joojiso” siideynta patchkaan. Waxaan dhahnaa “iska dhaaf”, si markaa shaqadaas hubaal ah looga faa’iideysan doono loogu talagalay Minecraft cusub sanadka 2020 la jaan qaada jiilka cusub ee loo yaqaan consoles, ama waqti ka waqti.
“Waa macquul in qaar idinka mid ah ay xusuustaan ​​inaan ku dhawaaqnay xirmada sawir gacmeedyada Super Duper Graphics inta lagu gudajiray E3 2017. Super Duper wuxuu ahaa hindise himilo leh oo aragti cusub u keenay Minecraft laakiin, nasiib darro, xirmada ayaa caddeysay inay farsamo ahaan aad u dalbaneyso in la hirgaliyo. qorsheeyay.
Waxaan ogsoonahay in tani ay niyad jab ku tahay qaarkiin qaar: waxaa jiray xamaasad badan oo Super Duper ah oo ka socota gudaha iyo banaanka istuudiyaha, laakiin nasiibdarro, kuma faraxsani waxqabadka xirmada qalabka oo dhan. Sababtaas awgeed, waxaan joojineynaa horumarinta xirmada oo waxaan raadinaa qaabab kale oo adiga kugu habboon si aad ula kulanto Minecraft leh muuqaal cusub.
Minecraft waxaa laga heli karaa habab badan oo balaadhan, waxaanan had iyo jeer isku dayeynaa inaan si buuxda uga faa’ideysanno qaab dhismeedka farsamada midkasta. Waxaan inbadan la wadaagi karnaa mawduucaas si dhakhso leh.
Waad ku mahadsan tahay dulqaadkaaga, waana ka xumahay inaadan raacin qorshayaashayada! “